Vitacee • Zifam Myanmar
Home » Products » Vitacee
Each Sustained Release Tablet contains;
Vitacee isawater-soluble vitamin C, essential for the formation of intercellular collagen and therefore is required for the maintenance of tooth structure,bone matrix and capillary walls.It is also important in oxidation-reduction reactions, amino acid metabolism, lipid and iron metabolism, resistance to infection and cellular respiration.
Adults and Children>10 years: 1-2 tabs daily to be swallowed whole with liquid. Vitacee should not be chewed.
Vitacee (Vitamin C 500mg)
Vitacee မှာ အရည်အသွေးမြင့် vitamin C 500mg ပါဝင်ပြီး Australia နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ပါတယ်။ vitamin C သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် ခန္ခာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းကြောင့် ရာသီအကူးအပြောင်း ကာလတွင်ဖြစ်စေတတ်သော အအေးမိတုပ်ကွေး ဖျားနာခြင်းတို့ကို ကုသရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Vitacee တွင် သကြားဓာတ်၊ ဆိုးဆေးအပြင်၊ ဆားဓာတ်တို့မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များ၊ နှလုံးရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါဝေဒနာရှင်များတွင်လည်း အထူးသင့်လျော်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ Vitacee ကို တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်သုံးရုံဖြင့် ၂၄နာရီ အကျိုးအာနိသင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီး နှင့် ကလေး အသက် (၁၀) နှစ်အထက်- တစ်နေ့ တစ်လုံး မှ နှစ်လုံး အထိ ရေနှင့်မျိုချ သောက်ပါ။ (ဝါးမစားရ)။အသက် (၂) နှစ် အောက်ကလေးများ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ မသောက်ရ။
ဗီတာမင်များကို နေ့စဉ်စားနေကျ အစားအစာများ အစားထိုးအနေဖြင့် သောက်သုံးခြင်းမပြုရ။
အပူချိန် (၃၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်၊ နေရောင်နှင့်တိုက်ရိုက် မထိတွေ့သောနေရာ၊ ခြောက်သွေ့သောနေရာ တွင် ထားပါ။ ကလေးများလက်လှမ်း မမီနိုင်သော နေရာတွင် ထားပါ။
ဆေးတစ်ကတ်စီ်တွင် ဆေးပြား (၁၅)ပြား ပါဝင်ပြီး ဆေးကတ်(၆)ကတ်ပါဝင်သော ကတ်ထူစက္ကူဘူးဖြင့် ထုတ်ပိုးထားသည်။